Sida badan ee aad ogtahay, Waxaan ka shaqeeya kitaab si ay u tagaan oo ay la socdaan aan album cusub, Life The Good. Well kitaabkan la sii daayo doonaa Moody daabacday on October 1,...
The safar Life Good furmay Isbuucaan! Ogow oo taariikhda noqon doonaa kuugu dhow. Waxaan noqon doonaa ee Minneapolis, Michigan, Virginia Beach, Nashville, Orlando, iyo Dallas. More dates will be added...
Kuwani waa lyrics ka gabaygayga iLove on my album cusub "Life Good The.” Qof kale dhibaato ay ka soo iLove? Verse 1: My girlfriend’s name starts with an I Shines bright like stars in...
My album Solo afaraad, "The Life Good” ayaa si rasmi ah la sii daayay! Iibso album ka iTunes halkan. Waxa kale oo aad ka qaadan kartaa album ee dukaamada ugu Lifeway, Family Christian, Mardel, and Target...